A Apple Watch SE oo la cusboonaysiiyay iyo mid kale oo leh dabeecad isboorti 2022 | IPhone news
Apple Watch SE oo la cusboonaysiiyay iyo mid kale oo leh dabeecad isboorti 2022
Waxaan joognaa dhamaadka sanadka iyo shirkadda Cupertino hadda waxay ku sugan tahay meeshan caajisnimo muuqata. Sababtan awgeed, wararka rasmiga ahi kama dhaafaan noocyada cusub ee nidaamyada hawlgalka kala duwan iyo kuwa Ololayaasha Christmas-ka si ay u bixiyaan qalabka.
Xaaladdan oo kale wararka xanta ah ee suurtogalka ah ee qalabka cusub ayaa horeyba u maamula kuwa kale, sida Mark Gurman. Falanqeeyaha caanka ah wuxuu tilmaamayaa in ay weheliso Apple Watch Series 8, Apple ay qorsheyneyso a Cusbooneysii ‌Apple Watch SE iyo suurtogalnimada doorashada daawashada ciyaaraha in qaar ka mid ah horeba u muujinayaan in ay la mid noqon karto naqshadeynta halyeeyga Casio G-Shock.
Apple Watch SE ma leeyahay isbeddel?
Waxaa suurtogal ah in qaar badan ay weli sugayaan nooca cusub ee saacadda bilowga sanadka laakiin runtii ma aaminsanin in tani ay sidaas tahay. Apple Watch SE ee hadda jira ayaa la bilaabay Sebtember 2020 iyo waxa ugu nabdoon ayaa ah in moodooyinka cusub, haddii ay yimaadaan, ay sidaas samayn doonaan isla bisha 2022. Su'aasha halkan ayaa ah haddii qaabkani runtii u baahan yahay isbeddel maadaama Apple uu leeyahay qaab dhaqaale, laga bilaabo gelitaanka, oo ku dar Waa maxay. cusub ayaa ka dhigi kara qiimahaaga kor u kaca.
Si kastaba ha ahaatee, noocyada SE had iyo jeer waa "dib loo warshadeeyey" qalab kale oo sidaas darteed Ma aaminsanin in Apple ay aad kor ugu qaadi doonto qiimaha ugu dambeeya ee moodelkan, waxay xitaa ku adkaysan kartaa isla qiimaha hadda jira ee nooca cusub ee 2022.
Dhanka kale, sida laga soo xigtay Gurman, waxaa jirta suurtogalnimada in Apple ay soo saari doonto nooc isboorti oo badan. Apple Watch-kan cusub ee la filayo, wuxuu yeelan doonaa naqshad "la xoojiyay" kaas oo ku dari kara kiis adkaysi u leh xagashada, kuuskuuska, dhicista iyo wixii la mid ah. Taasi waa sababta looga hadlayo suurtagalnimada Apple Watch oo ku dayanaya saacadda Casio ee khuraafaadka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch SE oo la cusboonaysiiyay iyo mid kale oo leh dabeecad isboorti 2022
WhatsApp waxay tijaabisaa naqshad cusub fariimaha codka ee beta ee iOS
Dhammaan wararka ka imanaya Apple 2022 sida uu qabo Gurman